Madaxweynaha oo kulan wadatashi ah maanta la qaatay dhallinyaro Soomaaliyeed.
Muqdisho,02, Agoosto-Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa sheegay in ay Dowladdiisu mudnaan weyn siineyso dhallinyarada oo uu ku tilmaamay in ay yihiin cudud aan looga maarmin nabadeynta, dib u dhiska iyo horumarinta dalka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in fursadaha dhallinyaradu ay yihiin kuwo aan xad lahayn, wuxuuna aad ugu dhiirri geliyay in ay is abaabusho oo ay ku midowdo hal hoggaan oo xaqiijiya xuquuqdooda isla markaana ku haga gudashada waajibaadka ka saaran dalka.
Madaxcweynuhu waa uu ka jawaabay su’aalaha isaga oo isla markaana sheegay in talooyinka iyo codsigaba la tix gelin doono. Wuxuuna ballan qaaday Madaxweynuhu in kulammada noocan ahi ay hadda ka dib sii socon doonaan.
Wasiirka Sportiga, Dr. Khalid Maxamed Cali, oo isaguna kulankaas khudbad ka jeediyay waxaa uu soo bandhigay waxqabadka Wasaaradda iyo in ay diyaarisay xarun ay dhallinyaradu ku shiri karaan ra’yigoodana ay ku kala qaadan karaan.